Ny mpiasa kristiana
Raha vao miresaka fiainam-pirenena isika dia misy sehatra telo tonga ao an-tsaina : ny fitantanana na ny fitondram-panjakana, ny sehatra ara- toekarena na ekonomika ary ny sehatra sosialy na ny fiahiana ny fiainam-bahoaka mivantana. Ny olona mpitondra dia samy miezaka daholo mitady izay vahaolana hanarenana ny tsy mety rehetra eto amin'ny firenena ary indraindray aza mampanantena fahasambaranaho an’ny vahoaka, indrindra moa amin’ny vanim-potoanan’nyfifidianana.
Inona no tadiavin'Andriamanitra amin'ny firenena ? ary koa, izaytokony ho fantatsika raha te hanova ny zavatra eo amin'ny firenena ny Tompo ?
Inona ny hevitr'Andriamanitra raha tiantsika hisy zavatra hiova amin'ny fianantsika ?
Tsy hoe akory ho lasa paradisa ny tany na koa hoe lasa sambatra daholo, fa misy kosa izay tian'Andriamanitra ho fantatsika sy hananantsika.
Mitaky finiavana sy dingana tsy maintsy arahina izany, fa tsy vitan'ny tsetsetra sy faniriana fotsiny . Io no tena sarotra amin’ny fandrosoan’ ny olona ary tsy misy dikany ny famelabelarana ara-pilazantsara sy ny toriteny raha tsy misy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny tsirairay izany.
Diniho tsara ary ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika. Hoy ny Soratra Masina Salamo 144 : 15 « Sambatra ny firenena izay tahaka izany; Eny, sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho Andriamaniny. »
Fepetra ilain'Andriamanitra amintsika ny hoe : izay manana an'i Jehovah ho Andriamaniny no sambatra. Ary koa « Raha nyoloko izay nantsoina amin'ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny. » 2 Tantara 7:14
Isika kristiana izany no loha-laharana sy tompon'andraikitra eo amin’ny firenena ! tsy ny mpanao politika na ny antoko politika akory ! Izay no dikan'io Tenin'Andriamanitra io "raha ny OLOKO" hoy izy izany hoe "raha ny mpiasa na ny mpitantana na ny mpiandraikitra izany nantsoina amin'ny anarako" : kristiana izany. Isika kristiana dia olom-pirenena ary tsy mahazo mialangalana na manilika andraikitra na amin'iza na amin'iza mihitsy manoloana ny zava-miseho eto amin'ny firenena.
Hoy koa ny Tompo « [Ny fivavahana marina, sy ny fivavahana tsy izy] Ezaho ny fiantsonao, fa aza atao malemy, Asandrato ny feonao ho tahaka ny an'ny anjomara,ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany!Ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany »Isaia 58 , izany hoe ny kristiana no manota ka mahatonga ny firenena marary sy ho latsaka anaty fahantrana.
Matahotra ny mpitondra fivavahana sy ny mpitory ny Filazantsara ankehitriny ny hilaza amin'ny kristiana fa manota izy ireo.... Matetika aza dia ireny tena mpanompo sampy sy mpijangajanga sy mpangalatra, sns...ireny no asaina mivavaka, faireo milaza ho kristiana tena manota dia afenimpenina ! mety hahamenatra azy ireo ny hiteny azy satria olona ambony, mpanohana ny asan'Andriamanitra ... Ny Tompo anefa efa nanafatra hoe: lazao amin'ny oloko ny fahotany!
Manota ny fiangonana, ny zanak'Andriamanitra, ny kristiana. Aza mieritreritra mihitsy ianao hoe ny vahoaka malagasy rehetra no voalaza eto. Tsy izany no tadiavin'Andriamanitra fa ny KRISTIANA. (diniho ny tenanao manoloana izany !)
Tsarovy ny tany Sodoma sy Gomora : hoy ny Tompo hoe raha misy olona 10 dia tsy ho ravako... Genesisy 18:26« Ary hoy Jehovah: Raha mahita dimam-polo marina ao an-tanàna Sodoma Aho, dia hamindrako fo ny tanàna rehetra noho ireny.» Genesisy 18:32« Ary hoy izy: Aoka anie mba tsy ho tezitra Hianao, Tompo, fa hiteny izao indray mandeha izao ihany aho : Angamba folo no ho hita ao. Ary hoy Izy: Tsy mba handringana Aho noho ny folo. »
Mijery tsara ny ota ataon'ny fiangonana amin'izao vanin'andro iainantsika izao Andriamanitra, diany tsy fetezany hanaiky ny Tenin'Andriamanitra na amin'ny lafiny inona na inona,
Ny atao hoe fahotana dia ny tsy fankatoavana ny Tenin'Andriamanitra. Matetika mantsy ny fandraisantsika izany dia hoe ny fijangajangana, ny fisotroan-toaka ... Tsy famaritana ny ota ireny fa efa ateraky ny ota .
Misy planin'Andriamanitra hitondrana ny firenena tsirairay avy eto an- tany, misy torolalana omen'Andriamanitra, manomboka any amin’ny mpitondra sy ny mpitantana (firenena, ambaratonga isan-karazany, tompona orinasa, mpiandraikitra samihafa...
A/Ny takian'Andriamanitra amin'ireo mpitondra sy mpitantana firenena, orinasa, fikambanana:
2 Tantara 7:14 « raha ny oloko (MPITONDRA) izay nantsoina amin'ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny. »
Avy aiza ny fahefana azontsika mpitondra?
Avy amin'ny Tompo izany, « Didin'ny mpiambina izany zavatra izany; eny, avy amin'ny tendrin'ireo masina izany zavatra izany, hahafantaran'ny velona fa ny Avo Indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany, ary olona ambany toetra no ampanapahiny azy. » Daniela 4:14
Ahoana ny hevitr'Andriamanitra ny amin'izany hoe fitantanana izany ?
Mazava ny Tenin'Andriamanitra eo amin'io Daniela 4 io fa Andriamanitra no mametra sy manendry izay mpitondra hitantana.Rehefa mety ho karazana mpitondra dia Andriamanitra no mametraka izany fa tsy olombelona, tsy antoko politika, tsy ny demokrasia. Izao mantsy no olana : tsy mety manaiky an'izay ny olona fa mihevitra hoe ny fahaizany, ny fahalalany na ny volany no mahatonga azy ho mpitantana, na ho mpitondra...
Tamin'ny andron'i Davida mpanjaka dia nalefa teo anatrehan'i Samoela izy 8 mirahalahy, fa tsy nisy iray akory tamin’ ireo no napetrak'Andriamanitra, na dia samy nanana ny maha izy azy aza izy ireo.
1 Samoela 16:7 « Fa hoy Jehovah tamin'i Samoela :Aza mijery ny tarehiny na ny hahavon'ny tsanganany, fa efa nolaviko izy; fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona no fijerin'i Jehovah; fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. »
Andriamanitra no mijery hoe iza no ataoko direktera, filoham-pirenena sns...Mety hieritreritra ianao hoe manana izahomanana diploma na olona ambony... Tsy ianao no nametraka ny tenanao eo amin'ny toerana misy anao, sao misy hirehareha hoe ny fahaizako no mahatonga ahy eto amin'ity toerana ity. Tsy misy na fahefana inona na inona hanao izany, fa Andriamanitra no mametraka sy manendry, satria hain'Andriamanitra atao ny manala anao eo amin'ny toerana misy anao na dia androany aza raha tiany hiala amin'izany ianao.
Izany no tian'Andriamanitra apetraka tsara fa raha vao tsy manaiky izany rafitra izany ny olona dia tsy maintsy mikorontana ny firenena. Ny fijerin'Andriamanitra dia tsy azo iadian-kevitra mihitsy . Mety hiteny ianao hoe taloha ange izany zava niseho izany ! tsia ! . Tsy miova izany Tenin'Andriamanitra « Ary rehefa fantatr'i Jesosy fa efa ho avy ny olona haka Azy an-keriny hataony mpanjaka, dia niala ka lasa indray Izy irery nankany an-tendrombohitra. » Jaona 6:15 . Rehefa nanomboka nanao zava-mahagaga Jesosy dia taitra be ny Jiosy hoe Izy no mety hatao mpanjaka sns...noheveriny mantsy fa noho ilay lazany dia mety hatao mpanjaka Jesosy. Tsy nanaiky izany Jesosy ary niala teo satria tsy hevitr'Andriamanitra izany.
Hoy nyFilipiana 3:20 « Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, ary avy any koa no iandrasantsika Mpamonjy, dia Jesosy Kristy Tompo »
- Ianareo rehetra izay mpitantana na mpitondra na mpiandraikitra dia aoka ho resy lahatra sy hanetry tena fa ny Tompo no nametraka anareo amin'ny toerana misy anareo ary azon'ny Tompo esorina eo ianareo na dia androany ihany aza !
Matetika ny olona mihevitra hoe andeha ity olona ity no atao direktera... betsaka koa ny milaza hoe "maninona ity olona ity mbola mipetraka eo amin' io toerana io ihany, nefa efa hita izao fa tsy mety ny ataony .. Andriamanitra no mitazona azy eo ! tsy misy olona afaka manozongozona izany planin'Andriamanitra izany.
Romana 13:1«Aoka ny olona rehetra samy hanaiky ny fahefana lehibe. Fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra; fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra.»
Izany no atao hoe planin'Andriamanitra ary ny olona izay manohitra izany no atao hoe manota ! Inona moa no mahatonga ny olona hikofokofoka ? manao "démarche" atsy sy aroa, manao propagandy etsy sy ery....satria heveriny ho izany no mety, ary tsy manaiky ny fitondran'Andriamanitra.
Ry kristiana, ahirato tsara ny masontsika .Hoy ny Tompo Romana 13:2« Koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra; ary izay manohitra dia hahazo fahamelohana.» ary koa « Raha manaiky sy mankatò ianareo, dia hihinana ny voka-tsoa amin'ny tany » Isaia 1:19, « Fa raha mbola mandà sy miodina ihany ianareo, Dia ho lanin'ny sabatra: Fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny. » Isaia 1:20
Inona moa no mahatonga izao krizy izao ? mangataka amin'Andriamanitra nefa tsy henoiny mihitsy ny vavaka, nahoana ?
Manohitra ny Tenin'Andriamanitra isika kristiana. Aoka isika hieritreritra tsara ny Tenin'Andriamanitra sy hankato izany. Anisan’ny ohatra ahitana fa tsy an'olombelona ny fahefana fa avy amin'Andriamanitra dia izay voalaza ao amin'ny Jaona 19:10-11« Dia hoy Pilato taminy: Tsy miteny amiko va Hianao? tsy fantatrao va fa manana fahefana handefa Anao aho, sady manana fahefana hanombo Anao amin'ny hazo fijaliana koa? Jesosy namaly azy hoe:Hianao tsy manana fahefana amiko akory, raha tsy nomena anao avy any ambony; koa izay nanolotra Ahy taminao no manan-keloka bebe kokoa. »
Nitady hirehareha Pilato tamin'izany, fa tsotra anefa ny navalin'i Jesosy azy dia ny hoe avy amin'Andriamanitra izany fahefana izany ary tsy manana zo hikasika Azy Pilato raha tsy Andriamanitra no mamela azy hanao izany !
Izany no tokony ho fantatsika na iza na iza isika mpitondra na amin'ny fanjakana na orinasa na mpitantana... fa Andriamanitra no mametraka antsika eo amin'ny toerana misy ankehitriny ary azony esorina amintsika izany.
Fanamarihana : ny atao hoe fahantrana dia tsy hoe akory ny tsy fananam-bola fa ny fahantrana anaty noho ny tsy fankatoavana ny Tenin'Andriamanitra
Indraindray koa isika miteny hoe "efa hita izao ve fa tena tsy mety ny ataon'ilay lehibe ao dia mbola avela amin'izao?" an'Andriamanitra izany fa tsy anjarantsika satria Andriamanitra no nametraka azy eo ary Izy no manana raharaha aminy mivantana fa tsy isika ! mba tsy hahatonga antsika kristiana HALOTO FO SY ERITRERITSIKA ERITRERITRA ! ka hitandrina tsara ny fiainantsika.
Fa raha Andriamanitra no nametraka anao amin'ny fitondrana, fahefana... ary fantatrao tsara fa avy amin'Andriamanitra izany dia mitsara amin'ny rariny sy ny hitsiny tsy misy fijerena tavan'olona ianao fa izany no takian'Andriamanitra aminao ! matoa Andriamanitra nametraka anao eo amin’io toeranao io dia mbola ho AMPAMOAHINA ianao.
Manaova zavatra aradrariny Romana 13:4«fa mpanompon'Andriamanitra izy hahatsara anao. Fa raha ratsy kosa no nataonao, dia matahora 'fa tsy entiny foana tsy akory ny sabatra; fa mpanompon'Andriamanitra izy, dia mpamaly handatsaka fahatezerana amin'izay manao ratsy.»
Raha tianao ny hiady amin'ny fahantrana dia hoy ny filazantsara Lioka 3:11-14«Ary namaly izy ka nanao taminy hoe:Izay manana akanjo roa dia aoka hanome ho an'ny tsy manana; ary izay manan-kanina, dia aoka hanao toy izany koa izy.Dia avy koa nympamory hetrasasany mba hataony batisa ka nanao taminy hoe: Mpampianatra ô,inona no hataonay? Ary hoy izy taminy: Aza mampandoa mihoatra noho izay notendrena halainareo. Ary nisymiaramilakoa nanontany azy ka nanao hoe: Aryinona kosa no mba hataonay? Dia hoy izy taminy:Aza mitohatoha foana amin'olona, ary aza miampanga lainga, ary mianina amin'ny karamanareo.»
B/Ny takian'Andriamanitra amin'ny mpiasa tsotra:
2 Tantara 7:14«raha ny oloko (MPIASA TSOTRA) izay nantsoina amin'ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny.»
Na inona na inona karazan'asa ataonao androany, manota ianao raha tsy mety manaiky ny Tenin'Andriamanitra.
Ohatra : ny fimonomononana fa kely ny karama sns... fa ataovy amin'ny fitiavana ny asanao. Fantaro tsara fa ny Tompo no mametraka anao eo.
Tadidinao ve ny tantaran'i Josefa ao amin'ny Genesisy 39, izay natao mpiasa an-trano na hoe mpanampy satria olona mbola voafonja. Asa heverin’ny olona ho ambany izany. I Josefa kosa anefa dia olona tena nahatoky ary tsy nimonomonona, nojeren’ Andriamanitra akaiky mihitsy ny fiainan'i Josefa. Resy lahatra hatramin'ny mpampiasa azy aza satria fa olona azo hitokisana tsara i Josefa, na dia nisy fakam-panahy nahazo azy aza. Nahatoky tsara izy teo amin'ny asany fa tsy nanao kitoatoa. Olonamanana toetra toy izany no tadiavin'Andriamanitra. Aoka ianao ho olona mahatoky amin'ny fitondran-tena sy ny fitantanana amin'ny zavatra rehetra.
Titosy 3:1«Mampahatsiarova azy hanaiky izay manapaka sy manam-pahefana, hanoa tsara, ho vonona ho amin'ny asa tsara rehetra»
Kolosiana 3:22«Hianareo mpanompo,maneke ny tomponareoaraka ny nofoamin'ny zavatra rehetra,tsy amin'ny fanompoana eo imaso, tahaka ny mpila sitraka amin'olona, fa amin'ny fahatsoram-po, matahotra ny Tompo »(na dia tsy kristiana aza ny mpampiasa anao)
Mila manaiky ny mpitondra isika, na dia jentilisa aza ny lehibenao, dia hajao izy satria izany no rafi-pandaminana (hiérarchie) apetrak'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly.Angataho amin'ny Tompo fa Izy nohampahafantatra anao izay tokony hatao sy ny tsy tokony.
Kolosiana 3:23 «ary na inona na inona no ataonareo, dia ataovy amin'ny fo,tahaka ny ho an'ny Tompo, fa tsy ho an'olona»
Raha miasa izany ianao , ary na inona na inona ataonao dia ataovy hoe ho an'ny Tompo izany fa tsy ho an'ny olona na ny orinasa na ny firenena. Ataovy azonao tsara fa Andriamanitra Tompon'ny hery sy fahefana no manome asa sy andraikitra ho anao. Hain'Andriamanitra ny mampahantra anao anio dia anio sy ny mampanakarena anao anio koa.
Raha miresaka fiainam-pirenena isika dia miainga amin'ny fiainan'ny tsirairay avy hatrany izany aloha fa aza miertitreritra hoe atao toy izao na toy izatsy ny firenena. Izay tadiavin'Andriamanitra dia ny tsirairay tompon'andraikitra aloha (mpitondra sy mpiasa). Aza ahilika amin'ny hafa ny andraikitra fa ianao aloha no manontany tena hoe manao ahoana ny ataoko?
Kolosiana 3:24« satria fantatrareo fany Tompo no handraisanareo ny lova ho valiny ; fa manompo an'i Kristy Tompo ianareo. »Esory amin'ny fisainanao izany ny hoe: ity toeram-piasana, ity fanjakana ity no manome ahy. Fa Andriamanitra mihitsy no manome ka amin'nyalalan'ireny olona irenyno hanomezany anao, ary tsy maintsy manaiky izy rehefa Andriamanitra no manao aminy hoe omeo izao io olona io. Hoy ny Tompo ao amin'ny Mpitoriteny 2:26« Fa ny olona izay ankasitrahan'Andriamanitra dia omeny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana;fa ny mpanota kosa ampiasainy hanangona sy hamory, mba hisy homeny izay ankasitrahan'Andriamanitra.Zava-poana sy misambo-drivotra* foana koa izany.[Na: Homan-drivotra] »Rehefa mankato tsara ny Tenin'Andriamanitra ianaodia Izy no miresaka mivantana amin'ny mpitondra, tsy eritreritry ny mpitondra izany fa tolo-tsaina avy amin'Andriamanitra. Matoa mbola mipetraka amin'ny toerana iray (mpitondra na mpiasa) ianao dia mbola misy hevitr’ 'Andriamanitra tiany hataonao sy ho tanterahina aminao manokana miaraka amin’ny mpiara-miasa aminao.
Farany :Inona ny atao hoe kristiana ?
Ny hoe kristiana dia ny olona nateraka indray ka tonga olom-baovao ao amin'ny Kristy Jesoa. Tandremo ary ny fihatsaram-belatsihy, mitonon-tena ho kristiana nefa tsy hita eo amin’ny fiainana akory i Kristy izay soloiny tena...
Rehefa tia hanova ny tantaran'ny firenena Malagasy Andriamanitra, dia mitady malagasy kristiana matahotra an’Andriamanitra ary vonona hiala amin'ny ratsy fanaony.
Izao no tanjon'Andriamanitra ho an'ny kristiana : Efesiana 4:13« mandra-pahatongantsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny Zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe,mahatratra ny ohatry ny halehiben'ny fahafenoan'i Kristy»
Ny hoe olona sambatra dia ilay fananana fiadanam-po anaty napetrak'i Jesosy Kristy ao anatin'ny fony , ilay atao hoe "Mandrakizay". Na dia ao anatin'ny fahasahiranana aza dia manana fitoniana anaty hatrany. Ny fahasambarana akory tsy midika hoe vola be na ny harena be. Ny firenena sambatra dia izay matahotra an'i Jehovah sy manana Azy ho mpanapaka 'ny fiainany. Io fahasambarana io no tian'Andriamanitra omena ny Malagasy. Tsy hoazoazo anefa io raha tsy manapa-kevitra hanaiky an'i Jesosy ianaoary hiala amin'ny ratsy fanao ary mankato ny Tenin'Andriamanitra . Tsy miova ny Tenin'Andriamanitra ary manana vahaolana Izy dia ny fanekena ny Teniny sy ny fahatahorana Azy. Mila fahasahiana sy fanapahan-kevitra ho an'ny isambatan'olona izany. Andramo fa hahita vokatra be sy firodoroboan’ny asanaoa ianao !
Tsarovy fa mbola ampamoahina isika amin’izay rehetra natao, ary efa nanendry andro ho amin’izany Andriamanitra. Tsy misy ho afa-miala amin’izany isika rehetra ! . Omany tsara ary ny mandrakizainao dieny eto ! – Mahereza ! Vakio ny Matio 24 .
Manàna fanapahan- kevitra amin’ny fomba fiasa, fitondran-tena... tia hanova ny fiainanao Andriamanitra ary indrindra tia hanome anao ny fiadanana maharitra.
Vavaka: "Tompo ô! manomboka anio dia hiverina amin'ny fankatoavana ny Teninao aho. Amen"